Ukubhaliswa kwe-22Bet - Ezemidlalo, Izimakethe, Ukubheja Amabhonasi ngo-2021
22Bet – Ukubuyekezwa Okuthembekile Kakhulu kweBhuku
I-22Bet ingubhuki omncane osemncane online; isayithi lethulwe ku-2018. Noma kunjalo, izakhele udumo olukhulu ngesikhathi esifushane futhi yaheha inani elikhulu lamakhasimende. Isiza silwela ukuba yindawo yonke yokugembula eku-inthanethi futhi lapho kuphela khona sinikeza ngemikhiqizo eminingi, njengekhasino nendawo yebhingo, ngaphezu kwezemidlalo bettng. Noma kunjalo, uma ulapha ku-Best Bookie kungenzeka ukuthi intshisekelo yakho eyinhloko ukubheja kwezemidlalo, futhi yilokho esizogxila kukho kulesi sibuyekezo se-22Bet.
Isixhumanisi esihlukile se-22Bet
Ukubhaliswa kwe- 22Bet
Ukubhaliswa kwe- 22Bet kuyashesha futhi kulula
Inqubo yokubhaliswa kwe-22Bet iqonde ngokungacacile. Vele uchofoze inkinobho ethi 'Ukubhalisa' etholakala phezulu ekhasini ngalinye ukuze uqalise.
Uzocelwa ukuthi ugcwalise ifomu elilula kakhulu. Mane unikeze ikheli lakho le-imeyili, igama lakho eligcwele, bese ukhetha iphasiwedi. Uzodinga futhi ukukhetha kusuka kuhlu lokwehlayo lwamazwe nezimali. Kuyaphawuleka ukuthi kunezimali eziningana ezitholakalayo, kufaka phakathi ama-cryptocurrensets.
100 kufikela ku- € 122
Iningi lezimakethe zezemidlalo
Ngemuva kwalokho kuzodingeka unikeze ngenombolo yeselula, futhi uzothunyelwa i-SMS enekhodi yokuqinisekisa. Ngemuva kokufaka ikhodi esizeni nokuqinisekisa inombolo yakho yocingo, uzonikezwa inombolo ye-akhawunti futhi uthumele i-imeyili yokuqinisekisa. Kuzodingeka ukuthi uchofoze isixhumanisi kuleyo imeyili ukuqinisekisa ukubhaliswa kwakho kwe-22Bet. I-akhawunti yakho ilungele ukusetshenziswa futhi uzokwazi ukwenza idiphozi yakho yokuqala bese uqala ukubheja.
22Bet Ibhonasi – Ukubheja Ezemidlalo Okuphayo namabhonasi ekhasino
Njengelungu le-22Bet, uzokwazi ukusizakala ngamabhonasi amaningi nokukhushulwa, ukuqala ngomusa wokuphana wamukelekile. Ibhonasi eqondile izohluka kancane kuye ngokuthi ukuleliphi izwe, kepha abantu abaningi bazonikezwa ibhonasi engu-100% kwidiphozi yabo yokuqala. Ngokwesibonelo, eCanada kune-100% efinyelela ku- $ 300 etholakalayo uma wenza idiphozi yokuqala okungenani engu- $ 2.
Imigomo nemibandela yebhonasi ye-22Bet ilungile kakhulu. Inani lebhonasi linezidingo zokubheja ezingama-5x okufanele zihlangatshezwe ngokubheja kwama-accumulator. Ngaphezu kwalokho, ukubheja ngakunye kwe-accumulator kufanele okungenani kube nokukhethwa kokuthathu futhi okungenani izinketho ezintathu kufanele zibe nokungavumelani okungu-1.40 noma ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ibhonasi kufanele ibhejwe zingakapheli izinsuku eziyi-7. I-22Bet iphinde igcizelele ukuthi amakhasimende aqedele inqubo yokuqinisekisa ubunikazi ngaphambi kokuba akwazi ukuhoxa, ngakho-ke kubalulekile ukubhalisa usebenzisa imininingwane yangempela.
Okuwukuphela kwephuzu elibi maqondana nale bhonasi ukuthi lifakwa ngediphozi yokuqala ngaphandle kokuthi uthikha ibhokisi elibhalwe ukuthi “Angifuni amabhonasi”. Noma kunjalo, kungumnikelo ophanayo futhi abantu abaningi abazofuna ukusizakala ngawo.
Kunamabhonasi amaningi atholakala ku-22Bet sportsbook njengebhonasi yokuphinda ulayishe ngoLwesihlanu engu-100% kuze kufike ku- $ 150, ibhonasi uma ushaya ukubheja okulandelanayo, ibhonasi yesaphulelo samasonto onke, nokukhulisa ukubheja okuqongelela. Isayithi liqala njalo ukunikezwa ngamabhonasi futhi bazokuthinta bayoba nayo yonke imininingwane oyidingayo.
22Bet Iselula – Ukubheja okulula usohambeni ngohlelo lokusebenza lwe-22Bet
Labo ababheja njalo kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi yabo ngeke badumazeke ngezinketho ku-22Bet. Ungamane ungene kwi-sportsbook ngokusebenzisa iwebhusayithi yeselula engu-22bet noma ungalanda uhlelo lokusebenza oluzinikele lwe-Android noma i-iOS. Zombili lezi zinketho zikunikeza konke ukusebenza kwewebhusayithi yedeskithophu, ngakho-ke ekugcineni kuyindaba yokuzikhethela komuntu. Izinhlelo zokusebenza zinganikeza ukufinyelela okushesha kancane, kodwa iwebhusayithi ephathekayo ngeke isebenzise isikhala sokulondoloza sedivayisi yakho.
Asikho isidingo sokwenza i-akhawunti ekhethekile ephathekayo ku-22Bet; ungasebenzisa iziqinisekiso ezifanayo nezakho kwikhompyutha yakho. Lokhu kusho ukuthi inqobo nje uma ukwazi ukufinyelela kudivayisi exhunywe kwi-inthanethi, ungangena ku-akhawunti yakho futhi ubeke ukubheja cishe nganoma yisiphi isikhathi. Ngaphezu kwalokho, ubheke isikhombimsebenzisi somsebenzisi eselula, kuyacaca ukuthi ukucabanga okukhulu kungene ekwakhiweni kwayo kuqinisekisa ukuthi kungenzeka ukuthi kwenziwe amadiphozi nokuzihoxisa kalula, funa amabhonasi, futhi kunjalo, ukubheja.
Umnikelo weselula uphelele kangangokuba asikho ngempela isidingo sokuvakashela i-22Bet kusuka kudivayisi yedeskithophu uma ungafuni. Kanjalo, kuyisinqumo esihle kulabo abakhetha ukubheja kusuka kuma-Smartphones abo noma amaphilisi.
Uhla Olumangalisayo Lwezemidlalo Nemakethe
Ububanzi bemidlalo ehlanganiswe ku-22Bet buhlaba umxhwele ngempela. Ubhuki empeleni unikeza izimakethe kuyo yonke imidlalo emikhulu efana ne-basketball, Ibhola laseMelika, ibhola likanobhutshuzwayo, ithenisi, igalofu njalonjalo. Noma kunjalo, badlulela ngalé kwalokhu. Akunandaba ukuthi umdlalo ofuna ukubheja ufihlwe kanjani, kukhona ithuba elihle kakhulu lokuthi uzothola izimakethe e-22Bet.
Uhlu oluphelele lwezemidlalo ngu:
Kuyo yonke le midlalo, I-22Bet ikwazi ukumboza inani elimangalisayo lamaligi, imincintiswano neminye imicimbi evela emhlabeni jikelele. Lokhu kusho ukuthi awunqunyelwe ukubheja kumaligi amakhulu kuphela. Ngokwesibonelo, uma ungumlandeli we-hockey yeqhwa uzokwazi ukubheja kwi-NHL yaseMelika. Noma kunjalo, ungabheja futhi kumaligi kulo lonke elaseYurophu, kufaka phakathi izigaba eziningi eziphansi. Ngokufanayo, i-sportsbook ayinikezi kuphela izingqinamba zebhasikidi ku-NBA, kodwa futhi kumaligi eYurophu, INingizimu Melika ne-Asia. Noma ubheka ezemidlalo ngokulandela okuncane kakhulu, njengokufaka uthango noma i-softball, uzothola ukuthi akukho ukushoda kwamaligi nemincintiswano yokubheja. Lokhu kuhlaba umxhwele ngempela futhi abagcini bamabhuku abaningi abadumile bayehluleka ukumboza uhla olukhulu kangako.
Kungashiwo okufanayo ngenani lezimakethe zokubheja ezitholakalayo. Ngokwesibonelo, umdlalo ojwayelekile we-NBA uzoba nezimakethe ezingaphezu kuka-600 zokubheja ezitholakalayo. Yebo zifaka zonke izinto ezijwayelekile, njenge-moneyline, kuyasakazeka, namathothali, kepha kunokunye okuningi ongakuthola. Uzothola inani elikhulu lokubheja kweziphakamiso, ezinye zazo zidala ngokweqiniso, futhi akukho sici somdlalo ongeke ukwazi ukubheja kuso. Le nketho enkulu yezimakethe zokubheja iyatholakala kuyo yonke imidlalo emikhulu, kepha noma ngabe unentshisekelo kumuphi umdlalo, uzothola izinketho eziningi.
I-22Bet futhi inengxenye ekhethekile yesayithi yalokho ekubiza ngokuthi ‘ukubheja kwesikhathi eside’. Lokhu kufana ncamashi nababhuki abaningi abakubiza ngokuthi ukubheja okuzayo; zimane zimakethe ezisebenza emicimbini ebanjelwa esikhathini esizayo esikude. Ngokwesibonelo, ungabheja ukuthi ngubani ozoqeda engxenyeni ephezulu yeligi ngesizini elandelayo ebangeni lezemidlalo. Kunesigaba esingeziwe sesiza esinikezelwe ukubheja bukhoma. Imicimbi eminingi inikela ngezimakethe ezahlukahlukene zokubheja bukhoma, Qedela ngokungeziwe okubuyekezwa ngesikhathi sangempela nezibuyekezo ezibukhoma ezivela kumcimbi. Kafushane, ukufakwa kwezemidlalo nezimakethe ezingama-22Bet konke okudingwa yinoma ngubani ukuze kube nokuhlangenwe nakho okuphelele kokubheja kwezemidlalo.
Ukunakekela Zonke Izidingo Zakho Zokugembula
Uma ukujabulela ukubheja kwezemidlalo, ke kunethuba elihle lokuthi ujabulela ezinye izinhlobo zokugembula ku-inthanethi futhi enye yezinto ezinhle mayelana ne-22Bet ukuthi inikeza konke ongakudinga kusuka ku-akhawunti eyodwa. Ngokwesibonelo, isayithi likhaya ku-22Bet Casino enezikhala nemidlalo ye-RNG evela kunombolo enkulu yabathuthukisi, kufaka phakathi okunye okuhle embonini efana neMicrogaming neNetEnt. Kukhona nekhasino elidayisa bukhoma elihlinzekwe abahlinzeki abanjengo-Evolution Gaming nePragmatic Play. Lapho uzothola wonke amakhadi wekhasino ajwayelekile nemidlalo yetafula (i-blackjack, roulette, baccarat, njll.) kanye nezihloko eziningi zemidlalo, okuyinto ephelele abadlali abayitoho.
Abathandi beBingo baqinisekile ngokuthanda umnikelo ku-22Bet ngemidlalo evela konjiniyela abaningi abaphezulu, njenge-MGA ne-Zitro. Kukhona ibhingo lendabuko kanye ne-slingo, futhi imidlalo yenzeka ubusuku nemini. Abadlali abavamile bazophinde bathokozele isigaba sama-22Games, lapho kukhona ukukhethwa kwemidlalo yelotho, imidlalo yedayisi, imidlalo ye-arcade, amakhadi okuqala, njalo njalo.
Kunokuningi ongakuthola kusayithi ye-22Bet futhi zonke izinhlobo zabadlali bokugembula nakanjani bazothola konke abangakudinga.
I- 22Bet yayo yi-A Qiniseka Ngokusobala Kubhuki We-inthanethi
Isiphetho sethu se-22Bet ngukuthi kungenye yababhuki be-inthanethi abahlaba umxhwele kakhulu esiwabonile. Cishe ayinakuqhathaniswa ngokuya ngemidlalo emingaki ehlanganiswayo nobubanzi bezimakethe zokubheja ezinikezwayo. Ngaphezu kwalokho, wonke amakhasimende ahlinzekwa ngokunikezwa okuvamile kakhulu kwebhonasi, iningi lazo liphana ngokweqile. Ukuqeda konke iqoqo elihle leminye imikhiqizo, ukuqinisekisa ukuthi awusoze wafuna kwenye indawo izidingo zakho zokugembula.